सुर्खेतमा कांग्रेसले साख जाेगाउला त ? यस्ताे छ मत तथ्याङ्क - Paschimnepal.com
सुर्खेतमा कांग्रेसले साख जाेगाउला त ? यस्ताे छ मत तथ्याङ्क
सुर्खेत । केही वर्षदेखि कांग्रेसको गढका रुपमा स्थापित सुर्खेतले यसपटकको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा त्यो विरासत राख्न सक्ला कि नसक्ला भन्ने प्रश्न निकै महत्वका साथ उठ्न थालिएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना २००६ सालमै भए पनि सुर्खेतमा २०४६ सालपछि मात्र वामपन्थी आन्दोलन प्रतिस्पर्धामा देखिएको थियो ।
विगत र हालै सम्पन्न स्थानीय तहको मत परिणामलाई आधार मान्दा आगामी मंसिरमा हुन गइरहेको प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा दलहरुले आ–आफ्नो दाबी गर्न थालेका छन् । रोचक केछ भने अहिले देशको राजनीति दुइ धुव्रमा विभाजित छ । एकातिर वाम गठबन्धन र अर्कातर्फ लोकतान्त्रिक गठबन्धनले देशको राजनितिक नयाँ तरंग ल्याएको छ ।
२०६४ सालको पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा एउटा क्षेत्र पनि जित्न नसकेको नेपाली कांग्रेस २०७० सालको दोश्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले सुर्खेतका तीन ओटा निर्वाचन क्षेत्र कब्जा गर्न सफल भएको थियो । संगठन मजबुद भएको नेकपा एमाले भने २०७० सालको निर्वाचनमा सुर्खेतबाट एउटा पनि सीट जित्न सफल भएन ।
कार्यकर्ताको वदमासीले गर्दा नै एमाले पराजित व्यहोर्नु परेको एमालेका एक नेता बताउँछन । २०७० सालको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले १ समानुपातिक सीट पाएको थियो । यता २०६४ सालतर्फ फर्किदा एमाले ३ ओटा निर्वाचन क्षेत्र मध्य २ निर्वाचन क्षेत्रमा विजयी भएको थियो । भने माओवादी केन्द्र १ क्षेत्रमा निर्वाचित भएको थियो ।
२०६४ को मत परिमाण
२०६४ सालको चैत्र २८ गते पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । त्यतिबेला मुलुक माओवादी केन्द्र पहिलो दल, कांग्रेस दोश्रो दल र एमाले तेश्रो दल भएका थियो । तर सुर्खेतमा भने एमाले पहिलो दल, माओवादी दोश्रो र कांग्रेस तेश्रो दल भएको थियो । २०६४ सालको निर्वाचनमा क्षेत्र नम्बर १ बाट ऋषिप्रसाद शर्मा चुनावी मैदानमा उत्रिएका थिए । चुनावको अन्तिम दिन प्रचार सकेर ऋषि घर फर्किने क्रममा अज्ञात समुहले ऋषिलाई गोली हानी हत्या गरि दिए । त्यतिबेला एमालेले ऋषिकी श्रीमती कमला शर्मालाई टिकट दियो ।
२०६४ सालको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका लालबहादुर घले एमालका कमलासंग ६ हजार ४६९ मतान्तरले पराजित हुन प¥यो । कमलाले १८ हजार ८०४ मत ल्याई बिजयी भएकी थिइन । माओवादीका खड्काबहादर घर्ति भने १० हजार ८७८ मत प्राप्त गरेको थिए ।
क्षेत्र नं. २ बाट नेपाली कांग्रेसका हृदयराम थानी एमालेका यामलाल कंडेलसंग १ हजार ६०४ मनान्तरले पराजित भएका थिए । एमालेका कंडेले १६ हजार २९७ मत ल्याई विजयी भए । माओवादीका सीता नेपालीले १४ हजार ४४१ मत ल्याएकी थिइन ।
यस्तै निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ मा एमालेका नवराज रावत माओवादीका नरबहादुर विष्टसंग ६ हजार ५३६ मत ले पराजित व्यर्होनु प¥यो । कांग्रेसका शिवराज जोशीले ६ हजार ५०४ मत प्राप्त गरे । २०६४ सालको पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा सुर्खेतका तीन ओटा निर्वाचन क्षेत्रमा गरी एमालेले ४५ हजार ९ सय ९४ मत प्राप्त गरेको थियो । यस्तै माओवादी केन्द्रले ४२ हजार ७ सय २९ मत र नेपाली कांग्रेसले ३३ हजार ५३२ मत ल्याएको थियो ।
२०७० मा कसको मत कति ?
दलहरुले यतिखेर २०७० सालको मत परिमाणलाई लिएर चुनावमा होमिएका छन् । २०६४ सालको निर्वाचन भन्दा त्यतिखेर परिणाम उल्टियो । यो निर्वाचनमा तीन ओटा निर्वाचन नेपाली कांग्रेस बिजयी भयो । २०७० सालको दोश्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा जिल्ला क्षेत्रमा कांग्रेसले ४९ हजार ४ सय ७८ मत प्राप्त ग¥यो । निर्वाचन क्षेत्र नं. १ मा १७ हजार ३०१, क्षेत्र नं. २ मा १७ हजार ४१९ र क्षेत्र नं. ३ मा १४ हजार ७५८ मत प्राप्त गरेको थियो ।
यतिबेला नेकपा एमालेले जिल्लाभरी जम्मा ३६ हजार ४४९ मत प्राप्त गरेको थियो । एमालेले क्षेत्र नं. १ मा १५ हजार ३ सय ९८, क्षेत्र नं. २ मा ९ हजार ११८ र क्षेत्र नं. ३ मा ११ हजार ९ सय ८३ मत प्राप्त ल्याएको थियो । माओवादी केन्द्रले भने २०७० सालको दोश्रो संविधानसभा २०६४ सालमा तुलनामा कम मत ल्याएको निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्क छ । माओवादी केन्द्र २०७० निर्वाचनमा जिल्लाभर जम्मा १८ हजार २६३ मत पायो । चौथो शक्तिका रुपमा चिनिने राप्रपा नेपालले जिल्लाभर जम्मा ४ हजार १४८ मत ल्याएको थियो ।
यसरी २०७० सालमा प्र्राप्त मत परिणामलाई आधारमा मान्ने हो भने लोकतान्त्रिक गठबन्धनको पक्षमा ५३ हजार ६ सय २६ मतदाता भएको पाइन्छ । एमाले—माओवादी गठबन्धन ५४ हजार ७ सय ६२ मत पाएको थियो । यसरी जोड घटाउ गर्दा वाम गठबन्धन १ हजार १३७ मतले मात्र अघि देखिन्छ । यस परिमाणले विश्लेषणले प्रदेश र संघमा कांग्रेसले नै बाजी मार्ने देखिन्छ ।
स्थानीयमा वामगठबन्धनको २० हजार मतले अघि
सुर्खेतमा ९ ओटा स्थानीय तह छन । गत वैशाख ३१ गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले ४ ओटा नगरपालिकार र २ गाउँपालिका सहित ६ ओटा स्थानीय तहमा आफ्नो पोल्टमा पार्न सफल भएको छ । एमालेपनि १ नगरपालिका र २ गाउँपालिका गरी ३ ओटा स्थानीय तहमा बिजयी हुन सफल भएको छ । माओवादी केन्द्र लगायतका साना दलहरुले भने कुनैपनि स्थानीय तह जित्न सकेका छैन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा जिल्लाभर नेपाली कांग्रेसले ५४ हजार ५ सय ६८ मत प्राप्त गरेको छ, भने ५२ हजार ७८७ मत एमालेको रहेको छ । माओवादी केन्द्रले एउटापनि स्थानीय तह जित्न नसकेपनि उसको पक्षमा १८ हजार ९८३ मत रहेका छ भने राप्रपासंग १ हजार ४ सय १३ मत छन् । यो नगरपालिका र गाउँपालिका प्रमुखहरुले प्राप्त गरेको मत संख्या हो ।
स्थानीय तहमा प्राप्त मतलाई आधार मान्ने हो भने वाम गठबन्धनको भोट ७१ हजार ७७० मत हुन्छ भने लोकतान्त्रिक गठबन्धनको ५५ हजार ९८१ मत रहेको देखिन्छ । लोकतान्त्रिक गठबन्धनभन्दा वाम गठबन्धन १५ हजार ७ सय ८९ मतले अघि छ । यसलाइ आधार मान्दा समग्र जिल्लाभरमा लोकतान्त्रिक गठबन्धन वाम गठबन्धनभन्दा कमजोर देखिन्छ । स्थानीय तहमा मात्र मतलाई मान्ने हो र सुर्खेतका प्रतिनीधि सभा र सबै प्रदेश सभामा बामगठबन्धनले बाजी मार्ने देखिन्छ ।
कति थपिए नयाँ मतदाता ?
अहिले २० हजार १७७ मतदाता सुर्खेतमा थपिएका छन् । स्थानीय तहमो निर्वाचनमा सुर्खेतमा १ लाख ८४ हजार ४ सय मतदाता थिए । आउने संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा सुर्खेतबाट २ लाख ४ हजार ५७७ जनाले मात्र मतदानमा सहभागि हुन पाउने निर्वाचन आयोग सुर्खेतले जनाएको छ ।
निर्वाचन क्षेत्र नं १ मा १ लाख १ हजार ६३७ जना र क्षेत्र नं. २ मा १ लाख २ हजार १४० जनाले मतदान गर्न पाउने छन् । निर्वाचन क्षेत्र नं. १ को प्रदेश सभा १ मा ४४ हजार ३४७, प्रदेश सभा २ मा ५७ हजार २९० मतदाता रहेका छन् । भने निर्वाचन क्षेत्र नं. २ को प्रदेश सभा १ मा ५६ हजार २६७ र प्रदेश सभा २ मा ४६ हजार ६७३ मतदाताहरु रहेका छन् । सुर्खेतमा १९ दलहरु मंसिर २१ गते हुने निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन ।
प्रकाशित मितिः बुधबार, कार्तिक १, २०७४ 9:53:45 AM
Prevपत्रकार ढुंगानामाथि प्रहरीद्धारा निर्घात कुटपिट
Next‘बालविवाहमुक्त वडा बनाउनेछु’